Nhau - Kushanda musimboti wepneumatic inodzora vharuvhu
Mavharuvhu Emakemikari Indasitiri Uye Marine
Chiwanikwa Steel Valve
Duplex Simbi Simbi Valve
Mavharuvhu EOiri neGesi
Api Ansi Bhora Valve
Api Ansi Tarisa Valve
Kushanda musimboti wepneumatic inodzora vharafu
Pneumatic inodzora vharuvhu inoreva iyo pneumatic control vharafu, iyo inotora sosi yemhepo sesimba, humburumbira seactuator, iyo 4-20mA chiratidzo sechiratidzo chekutyaira, uye inotyaira vharuvhu kuburikidza nemidziyo yakadai sevheji yemagetsi , inoshandura, solenoid vharafu uye inobata vharuvhu, kuitira kuti vharuvhu iite chiito chemutemo neyakaenzana kana yakaenzana kuyerera hunhu, Saka, kuyerera, kumanikidza, tembiricha uye mamwe maitiro eparamende yepakati yepayipi inogona kugadziriswa nenzira yakaenzana.
Pneumatic control vharafu ine zvakanakira kudzora kuri nyore, kupindura nekukurumidza uye kuchengetedzeka kwemukati, uye kana ikashandiswa muzviitiko zvinopisa uye zvinoputika, haidi kutora matanho ekuwedzera ekupupurira.
Kushanda musimboti wepneumatic inodzora vharafu:
Iyo pneumatic yekudzora vharuvhu inowanzo kuve inoumbwa ne pneumatic actuator uye inodzora vharuvhu kubatana, kuisirwa uye kutumwa. Iyo pneumatic actuator inogona kuganhurwa mumhando mbiri: imwechete yekuita mhando uye kaviri chiito mhando. Iko kune kudzoka chitubu mune imwechete chiito actuator, asi hapana kudzoka chitubu mune kaviri chiito actuator. Iyo imwechete inoita actuator inogona kudzoka otomatiki kune iyo yekuvhura kana yekuvhara nyika yakagadzika nevhavha kana mweya sosi warasika kana vharafu ikakundikana.
Action maitiro epneumatic anoronga vharafu:
Kuvhura kwemhepo (kazhinji kwakavharwa) ndipo apo kumanikidza kwemhepo pane iyo membrane musoro kunowedzera, vharuvhu inofamba ichienda kunongedzo yekuwedzera kuvhura. Kana iko kwekuisa mweya kumanikidza kwasvika, vharafu iri yakazara yakavhurika mamiriro. Nekudaro, kana mweya wemhepo ukadzikira, vharuvhu inofamba ichienda nenzira yakavharwa, uye kana pasina mhepo inopinza, vharafu yakavharwa zvizere. Kazhinji kutaura, tinosheedza iyo yekuvhura mweya inodzora vharuvhu sekukanganisa kwakavharika vharuvhu.
Yekuita nzira yemhando yekuvhara mweya (kazhinji yakavhurika mhando) yakanangana neiyo yemhepo yekuvhura mhando. Kana mweya uchinge wawedzera, vharuvhu inofamba ichienda munzira yakavharwa; kana mweya wemhepo ukadzikira kana kusingaiti, vharuvhu inozovhura kana kuvhurika zvizere. Kazhinji kutaura, tinodaidza gasi rakavhara mhando inodzora vharuvhu sekukanganisa kuvhura vharuvhu
Musiyano uye kusarudzwa pakati pakakwirira chikuva bhora vharafu uye zvakajairika bhora vharafu
Yakakwira chikuva bhora vharafu, iyo inonzi yakakwira chikuva bhora vharuvhu, inotora is05211 yekugadzira standard, ichikanda mativi kana kutenderera flange uye bhora vharuvhu semuviri, uye kumagumo kumeso kwepuratifomu kwakakwirira kupfuura kwekunze kumucheto kweiyo flange pane ese ari maviri. inoguma, iyo isiri chete inobatsira pakuisa pneumatic actuator, magetsi actuator uye mamwe maactuator zvishandiso, asi zvakare inovandudza zvakanyanya kugadzikana pakati pevhavha neactuator, uye iyo chitarisiko chakanyanya kunaka uye chakanatswa.
Iyo yakakwira chikuva bhora vharafu chigadzirwa chekushanduka kweyakajairika akajairwa bracket bhora vharuvhu. Musiyano uripakati pepuratifomu yebhora vharuvhu uye yakajairwa bhora vharuvhu ndeyekuti inogona kuve yakabatana yakanangana neactuator yekutyaira pasina kuwedzera inobatanidza bracket, nepo yakajairwa bhora vharuvhu inogona kungoiswa neactuator mushure mekunge bracket yaiswa. Pamusoro pekubvisa iyo yekuwedzera bracket kuisirwa, nekuti inoiswa zvakananga papuratifomu, kudzikama pakati peactuator nevharuvhu yebhora kunowedzerwa zvakanyanya.
Iko kunakirwa kwepamusoro papuratifomu bhora vharafu ndeyekuti inokwanisa kuisa zvakananga pneumatic kana emagetsi actuator papuratifomu yayo pachayo, nepo zvakajairika bhora vharuvhu inoda imwe yekuwedzera vharuvhu kubatanidza, iyo inogona kukanganisa iyo vharafu iri kushandiswa nekuda kwekusununguka bhureki kana kunyanyisa coupling coupling. Yakakwira chikuva bhora vharuvhu haizove nedambudziko iri, uye mashandiro ayo akatsiga kwazvo panguva yekushanda.
Mukusarudzwa kwepamusoro papuratifomu bhora vharafu uye yakajairwa bhora vharafu, chimiro chemukati chepamusoro chikuva bhiridha vharuvhu ichiri chirevo chekuvhura nekuvhara, chinoenderana neyakajairika bhora vharuvhu. Kuwedzera pane zvakanakira zvataurwa pamusoro, kana tembiricha yepakati iri mudenga, bhureki rinobatanidza rinofanirwa kushandiswa kuchengetedza zvakajairika mashandisirwo eactuator uye kudzivirira anoita kuti isakwanise kushandisa nekuda kwepakati kupisa kupisa.
Post nguva: Chivabvu-19-2021
yedu Yekuratidzira, Kushanya, Chiitiko
Miseve Seal Valve
High Pressure ndokugadzira Steel Valve
Kushanda musimboti wepneumatic inodzora ...
Runhare: 0086 311 87161466
Kero: Kutenderera Nyika B - 1711 226 North China Street, Sjz, Hebei, China
Chiwanikwa Steel Ball mavharuvhu, Bronze Bhora Valve Ine Ptfe Zvigaro, Stainless simbi Ball mavharuvhu, Stainless simbi Ball Valve, Ndarira Ball Valve, Utsanana Stainless Steel Ball Ball mavharuvhu,